Nagu saabsan - AnHui Gaoge Qalabka Sirdoonka Qalabka Co., Ltd.
Fikradahayagu waxay noqdaan xaqiiqadaada
GAOGE waxay soosaartaa, naqshadeysaa, soo saartaa oo rakibtaa dhir dhammaystiran oo miisaaman, baakidh, shandado, palletizing, duubis iyo gaadhsiinta bacaha iyo bacaha.
Khadadka otomaatiga ah ee u taagan heerkooda sare ee kalsoonida, tayada, iyo ikhtiraaca farsamada.
GAOGE waxaa ku qanacsan macmiil weyn, heer qaran iyo heer caalami, hal-abuurnimadiisa, isku halaynteeda iyo heerka tayada sare ee xalalkeeda farsamo.
Kartida iyo khibrada waaxdeena farsamo waxay hubineysaa xalal shaqsiyadeed, xalal gaar ah, si loo buuxiyo shuruudaha macmiil kasta.
Illaa iyo hadda shirkado badan oo ku yaal Shiinaha iyo adduunka oo dhan waxay doorteen inay nagu tiirsanaadaan xalalkeenna, kuwaas oo u muuqda tayada sare, kalsoonida iyo waxtarka.
Warshad wax soo saar muhiim ah
Goobta wax soo saarka GAOGE, oo ku taal magaalada Gangji Town, Hefei, Anhui, Shiinaha, waxay ku fadhidaa wadarta guud ee gudaha gudaha 3000 m².
Feejignaan u leh mashiinnada baakadaha, tan iyo 2010 shirkaddu waxay ku qalabeysan tahay lathes-ka CNC, saxaafadda feerka CNC, mashiinka foorarsiga, mashiinka goynta laser, mashiinka iwm.
Iyada oo leh cabirkeeda cajiibka ah iyo qalabka kala duwan, warshadda Gaoge waxay soo saari kartaa nidaamyo dhammaystiran oo dhammaystiran oo dhammaystiran.
GAOGE oo kuxiran falsafadeeda wax soo saar ee u gaarka ah, waxay soo saartaa dhammaan qaybaha ugu badan ee lagama maarmaanka u ah mashiinadeeda u gaarka ah warshaddeeda.
Dhammaan alaabada GAOGE waxaa loogu talagalay laguna soo saaray shirkadda dhexdeeda. Si taas loo gaadho, GAOGE wuxuu ku kalsoonaan karaa koox ka kooban naqshadeeyayaal iyo farsamo yaqaanno awood u leh inay soo saaraan nooc kasta oo mashiin ah min bilow ilaa dhammaad.
Adeegsiga xarumaha shaqada ee ku saleysan aaladaha mashiinka xakamaynta lambarrada, mashiinnada goynta leysarka, qalabka wax lagu jaro iyo qalabka kala duwan ee hal-abuurka leh ayaa u oggolaanaya GAOGE inuu soo saaro inta badan qeybaha farsamada ee mashiinkeeda.
Falsafadan wax soo saar waxay u tarjumaysaa macaamil taxane ah macaamilka, kaas oo ku kalsoonaan kara xakamaynta tayada buuxda ee qaybaha iyo isweydaarsigooda buuxa, iyadoo la dammaanad qaadayo xawaaraha fulinta ugu badan ee mashiinnada cusub iyo sidoo kale qaybaha dayactirka.
Xalka baahiyaha oo dhan
GAOGE waxay bixisaa wax ka badan kaliya mashiinada wax lagu duubo. Waxay soo saari kartaa nidaamyo dhammaystiran, laga bilaabo keydinta alaabta ceeriin illaa daraasadda iyo rakibidda wareegga wax soo saarka oo dhan, iyadoo lagu soo gabagabeynayo baakadaha.
Mid ka mid ah qiimayaasha shirkaddeena lagu daray ayaa ah awooda lagu soo bandhigo qaybo qalab ah oo loo habeeyay iyadoo lagu saleynayo codsiyada macaamiisha. Laga bilaabo heer dhisme sifiican loo tijaabiyay, GAOGE wuxuu soo bandhigi karaa xalal taxane ah oo loo abuuray si sifiican looga jawaabo baahiyaha dhabta ah ee macaamiisha, isku darka kalsoonida, fudaydinta rakibida iyo dabacsanaanta isticmaalka.
Waan ka warqabnaa doorkeena muhiimka ah ee kobcinta ganacsiga tikniyoolajiyadeed ee macaamiisheenna. Waajibkayagu wuxuu ku lug leeyahay wax ka badan oo keliya keenista mashiinnada iyo qalabka: waxa aan bixinno waa adeegyo la-talin oo buuxa.
Waa adeeg la socda macaamiisheena laga bilaabo qorshaynta warshadda ilaa dhismaheeda iyo firfircoonideeda, laga bilaabo tababarka shaqaalaha ilaa hagaajinta mashiinnada. Xiriir dhow oo aan la leenahay macaamiisheenna, oo soconaya illaa waqti mahadnaq ah adeeggayaga macaamiisha, urur dhammaystiran oo sifiican u qeexan kadib iibka, mas'uul ka ah daryeelka macaamiisheenna.
Ujeedada ururkan waxaa lagu soo koobi karaa saddex ficil oo waaweyn:
1. maaraynta codsiyada iyo xaaladaha degdegga ah
2. maaraynta dayactirka
3. maaraynta qalabka dayactirka
Deg-degga waxqabadka iyo abaabulka, oo awood u leh dammaanad qaadka gaarsiinta macaamilka, meel kasta iyo 48 saac gudahood, ayaa ka mid ah qodobbo xoog badan oo GAOGE ah.
Markasta ku dadaala hogaaminta
Dhammaan alaabooyinkeenna waxaa lagu baranayaa, loo qaabeeyey laguna soo saaray shirkadda gudaheeda. Falsafadan wax soo saar waxay u tarjumaysaa faa'iidooyin taxane ah macaamiisha:
1.absolute xakamaynta tayada qaybaha
Isweydaarsiga qaybaha guud
3. xawaaraha fulinta ugu yar
Adeeg sax ah oo ku saabsan mishiinada cusub iyo qalabka dayactirka
Raadin joogto ah oo tayo leh
Markaan higsaneyno hadafka ah inaan si joogto ah u wanaajinno tayada mashiinadeena iyo adeegga "macmiilkeena", waxaan isku hubeynay nidaam maamul oo tayo leh oo loogu talagalay howlahayaga wax soo saar, iyadoo la raacayo qaab la aqoonsan yahay oo caalami ah oo caan ah, ISO 9001-2015, oo ku saleysan kaas oo shahaadadeena la siiyay dhowr sano ka hor. Sidoo kale waxaan helnay shahaadada CE ee mashiinadayada.